Amanyathelo ama-7 kwimpumelelo yokuThengisa uMxholo | Martech Zone
Amanyathelo ama-7 kwimpumelelo yokuThengisa uMxholo
NgoMvulo, Meyi 5, 2014 NgoLwesibini, Meyi 6, 2014 Douglas Karr
Ayifanelanga ukuba ngumbuzo kwakhona malunga nexabiso kunye nokusebenza kwesicwangciso esiqinileyo sokuthengisa umxholo. Ishishini lakho lifuna ukubetha kwentliziyo ngokungaguquguqukiyo komxholo osasaza kuwo ofumana ingqalelo yamathemba, okwakha igunya lakho kunye nokuthembela kwi-Intanethi, kwaye ekugqibeleni uqhube uguquko ngeendlela zakho zokungena kunye neziphumayo. Akukho mmangaliso kule nto infographic evela kwi-Smart Insights -Kodwa ukwakha i qhinga lokuthengisa umxholo okhuphisanayo yenziwe kakuhle kolu lula infographic yokwetyisa.
Ukukunceda uphonononge okanye umlinganiso wokuba ukhuphisana njani nokuthengisa umxholo wakho, kwinyathelo ngalinye kwi-infographic, ndibandakanye uphando olufanelekileyo olusimahla Ukulawula ukuThengiswa kweMixholo kwingxelo yophando ka-2014 I-Smart Insights ezenziwe nge Hubspot.
Amanyathelo asi-7 kwimpumelelo yokuThengisa uMxholo
Benchmark ukusetyenziswa kwakho kwangoku kwentengiso yomxholo.
Phuhlisa intengiso yomxholo qhinga.
Qonda abathengi kunye negama iimfuno ukusuka kumxholo.
Yenza isilumko utyalo kwintengiso yomxholo.
Khetha okona kulungileyo mix lwezixhobo.
Yenza owona mxholo usebenza Ifom.
ukusebenzisa kubahlalutyi ukuphonononga i-ROI kunye inani.
Isaziso seWebinar: Ukuguqulwa ngokuBalisa amaBali
ICrittercism: UkuBekwa eSweni kokuSebenza kokuSebenza